World Evanjelistra Reinhard Bonnké ny fahafatesan'i | Apg29
World Evanjelistra Reinhard Bonnké ny fahafatesan'i
An-tapitrisany nitsidika ny fivoriana sy ny olona foana ny voavonjy.
Maro ny olona no voavonjy taorian'ny toriteny ary avy eo dia nivavaka ho an'ny marary. Avy eo izy dia tonga indray ilay vehivavy ao amin'ny seza misy kodiarana, dia nametra-tanana moramora eo amin'ny handriny sy ny dia lavitra azy avy eo, ary dia nanomboka nandeha.
lördag 7 december 2019 21:17
izao tontolo izao Evangelist
Reinhard Bonnké dia izao tontolo izao kristianina evanjelistra sy ny mpitory. Nanomboka ny asa fitoriana ny Filazantsara tany amin'ny taona 1970, ary nisy fivoriana lehibe ao amin'ny trano-lay. Tatỳ aoriana, rehefa nahazo ny fivoriana lehibe dia nifindra teo amin'ny saha lehibe. Any Nizeria nitsidika an-tapitrisany maro ny fivoriana.
Reinhard Bonnké dia 79 taona. Ny sary etsy ambony dia avy amin'ny 2014 ary nalaina tao amin'ny Wikipedia.
Dia foana ny olona voavonjy
Efa reko Reinhard Bonnké nitory vitsivitsy fotoana sy ny olona foana no voavonjy. Misy mihevitra fa niakatra ho 75 tapitrisa nandray an'i Jesosy Kristy ary dia voavonjy tamin'ny fanompoana fitoriana ny filazantsara!
Dia nitory ny filazantsara tany amin'ny fifohazana fanentanana manerana izao tontolo izao, ary niasa ho an'ny 60 taona ho evanjelista. Nitsidika imbetsaka koa ny Bonke Soeda. Koa eto dia ny olona voavonjy amin'ny alalan'ny ny fanompoany.
Taona maro lasa izay nankanesako tany Sekoly Ara-baibolin'i Pentekosta ao amin'ny Fiangonana Pentekotista Jönköping dia nandeha ny mpianatra lavitra any Eoropa Atsinanana, fa nijanona vetivety ny bisy nankany an-tanàna Hanovre ao amin'ny ankehitriny Andrefana Alemaina sy nihaino an'i Reinhard Bonnké famoriam-bahoaka tao amin'ny fampielezan-kevitra.
Vehivavy in seza misy kodiarana
Maro ny olona no voavonjy taorian'ny toriteny ary avy eo dia nivavaka ho an'ny marary. Dia nahita vehivavy nipetraka tao amin'ny seza misy kodiarana. Dia nametraka ny tànany tamin'ny ireo izay tonga, ka na dia ny vehivavy eo amin'ny seza misy kodiarana, ary avy eo dia nandroso. Nojereko tena tsara mba hahitana raha na inona na inona nitranga. Fa na inona na inona nitranga.
Avy eo izy dia tonga indray ilay vehivavy ao amin'ny seza misy kodiarana, dia nametra-tanana moramora eo amin'ny handriny sy ny dia lavitra azy avy eo, ary dia nanomboka nandeha. Izahay teny an-dalana dia mazava, talanjona, ary tsy nino ny masontsika. Tsy fantatro izay tsy mety aminy, nefa fantatro nitsangana izy ka nandeha ihany.
Nahazo an-tapitrisany ho an'i Jesosy Kristy
Ny Pentekotista Zavatra mpitarika Daniel Alm manoratra ao amin'ny twitter :
"Reinhard Bonnké nahazo an-tapitrisany noho ny amin'i Kristy. I faly be indrindra izy. Izy dia kilasika Pentekotista mpitory. Tsaroako fony aho nihaino azy tany Berlin, Soeda, ary toy ny tara toy ny 2018 tao Helsinki. Mandria am-piadanana, Atoa" Ich Bin Evangelist! " .
Ankehitriny, Reinhard Bonnké evanjelista an-trano Jesosy, rehefa nanao ny evanjelistra atao tsara!
Publicerades lördag 7 december 2019 21:17:55 +0100 i kategorin och i ämnena:
Sverige: Vad betyder Allahu akbar?
Lukas: Vad betyder Allahu akbar?
Tommy.: Profetiska nyheter – September 2020